Fifaninanana hidirana ao amin’ny ENAP Fantatra ireo 500 mianadahy afaka fanadinana
Hatao peta-drindrina manerana ny fonja rehetra eto Madagasikara, sy eto amin’ny Ministeran’ny Fitsarana eto Faravohitra ary any amin’ireo biraom-paritry ny FOP. Fantatra ankehitriny ireo 500 mianadahy afaka fanadinana amin’ny fifaninanana hidirana ao amin’ny Sekolim-pirenena manofana ho Mpandraharahan’ny Fonja (ENAP) ao Antetezambaro, Toamasina. Nivoaka androany Talata 05 Oktobra 2021 ny lisitri’ireo 412 lahy sy 88 vavy izay voaray hiofana mandritra ny 12 volana any amin’ny ENAP.
Nadio tanteraka ny fifaninanana. Tsy nisy ny kolikoly. Tratra ny tanjona.
Ny Alahady 7 Novambra 2021 amin’ny 6 ora maraina no fidirana ho an’ireto mpianatra vaovao any Antetezambaro.
Mitondra fanampim-panazavana ny Tale Jeneralin’ny Fandraharahana ny Fonja (DGAP), Atoa RANAIVO ANDRIAMAROAHINA Tovonjanahary.
Lisitr’ireo 500 mianadahy (412 lahy, 88 vavy) afaka tamin’ny fifaninanana hidirana ao amin’ny Sekolim-pirenena manofana Mpandraharahan’ny Fonja (ENAP)
LISTE PAR ORDRE DE MERITE DES CANDIDATS ADMIS :
Fanapariahana lalàna : Midina ifotony any Ambohidratrimo ny DERL
Mitohy ny ezaka fanapariahana ny lalàna, ataon’ny Foibem-pitantanana misahana ny Fandinihana sy Fanavaozana Lalàna (DERL) eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana. Ny Distrikan’Ambohidratrimo (24 kaominina) indray no misitraka ny fidinana ifotony mikasika ny fampahafantarana lalàna sy paikady arahina eny anivon’ny Fitsarana, izay atao mandritra ny telo andro (05, 06, 07 Oktobra 2021) ao amin’ny Tranompokonolona ao amin’ny Kaominina Ambohidratrimo.
Izany dia tontosaina miaraka amin’ny Mpitsara tompon’andraikitry ny fiankohonana eo anivon’ny Fampanoavana, Fitsarana Ambaratonga Voalohany Anosy Antananarivo. Mpanohana ny tetikasa PAJMA. Mpandray anjara kosa ireo Ben’ny tanàna, ireo Ben’ny tanàna lefitra, ireo lehiben’ny Boriborintany sy ireo mpiandraikitra ny sora-piankohonana avy ao amin’ny Distrikan’Ambohidratrimo.
Ny lohahevitra entin’ny sampan-draharahan’ny fanapariahana lalàna ao amin’ny DERL /MINJUS amin’ity dia mikasika ny paikady heloka, ny zaza manao heloka, ny ady amin’ny herisetra mifototra amin’ny maha-lahy na maha-vavy (VBG), ny lalàna momba ny fananan-tany,ny fandovana, ny fisaraham-panambadiana, ary ny asan’ny mpiraki-draharaha eny anivon’ny Fitsarana.